चार सन्तान जन्माउने दम्पत्तीको रोदन – हाम्रो आँखा र मुटु बेच्न मिल्ने भए बेचेर बचाउँथ्यौ – Gulmiews
चार सन्तान जन्माउने दम्पत्तीको रोदन – हाम्रो आँखा र मुटु बेच्न मिल्ने भए बेचेर बचाउँथ्यौ
१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार १९:५३ Raju Gautam
गुल्मी, फागुन–१६। यदि यो देशका नेता, प्रधानमन्त्री , मन्त्रीहरु र उनका आसापासेहरुले चार सन्तान एकै साथ जन्माएको भए ठुलो उत्सव हुन्थ्यो होला । राष्टिय सञ्चार माध्यमले पनि निकै महत्वका साथ उठान गर्थे होला तर एउटा सर्वसाधरणले चार सन्तान जन्माउँदा कसालाई मतलव छ्ैन । यहि कुरा मनमा खेल्छ जव लुम्विनी मेडिकल पाल्पा प्रभासमा एकै साथ चार सन्तान जन्माउने गुल्मीका एक दम्पत्तीको रोदन सुन्दा ।
‘पाल्पाका सिडियो , एलडियो देखि पत्रकारहरु पनि चार सन्तान हेर्र्न त आए तर सरकारी निकायबाट ति चार सन्तान बचाउनका लागि कुनै सहयोग भएन–‘ ति सन्तानका पिता जनक कुँवरले भक्कानिदै भने –‘ यिनीहरुलाई बचाउनका लागि हामी दुई बुढा बुढीका आँखा र मुटु बेच्न मिल्ने भए बेचेर बचाउँथ्यो अरु उपाए केहि छैन् ।’
सुरुमा गुल्मीको जैसीथोक २ रातापोखरा निवासी २६ वर्षिया गीता कुँवर र सरकारी अस्पताल तम्घासको शरणमा पुगेकी थिईन् । तर त्यस अस्पतालमा डाक्टर नभएको भन्दै निजी अस्पाल रेसुङ्गामा पठाउको गिता बताउँ छिन् । त्यस अस्पालले चार वटा सन्तान रहेको भन्दै प्रशुति सेवाका लागि लुम्विनी मेडिकल कलेज पाल्पा प्रभास पठायो । मंसिर १६ गते त्यस अस्पतालमा भर्ना भएकी गिता कुँवरको पेटवाट त्यसको दुई महिना पछि पुष ३० गते चार सन्तान अप्रेशन गरेर निकालियो । उनिहरुको तौल कम भएको भन्दै उनिहरुलार्इृ आईसियु कक्षमा राखियो । अहिले झण्डै चार महिना देखि ५ लाख भन्दा बढि खर्च भई सक्यो अझै कति लाग्ने हो थाह छैन् ।
खर्च भएको उक्त रकम ऋण तिर्दा जनकको भागमा पर्ने अंशले पुग्दैन । दुई भा्ई मध्ये ्भाईको ऋण देखे पछि दाजु छुट्टिने सुुरमा छन् । जनक भन्छन –‘मैले वुवाबाट पाउने सम्पत्ती वरावरको खर्च गरी सके अव म आफु बेचिनु शिवाय अरु उपाय नभए पछि मिडियाको सहयोग मागेको हुँ । ’ चार सन्तान मध्ये कान्छा छोराको दायाँ आँखामा पिप जमे पछि त्यस असपताले रणअम्विका आँखा अस्पताल भैरहवा पठायो । ‘उसले काठमाण्डौ लैजान भनेको छ’– जनकले रुदै भने –‘मं संग नजाने खर्च छ न त्यहाँ मेरो आफ्नो भन्ने कोही छ कसरी जाउँ ?’
‘ यहाँ यि वच्चा–वच्ची हेर्न आउने जो कोहीलाई सहयोगका लागि जम्ले हात ग¥यौ तर कसैले सहयोग गरेनन्’– गिताले रुदै भनिन –‘मेरो यो विलौना सुनेर कसैले सहयोग गरेर मेरा यि सन्तान वचाई दिए मेरा आत्माले आशिष दिने थियो ।’ २६ वर्षिया गिताका ति सन्तान बचाउन नसके अव उनका सन्तान नहुने बताईएको छ । त्यसले गर्दा पनि उनी ति सन्तान बचाउनुलाई आफ्नो दाम्पत्य जिवनको भविस्य संग जोडेर चिन्तामा छन् ।
‘भोली सम्म काठमाण्डौ लैजान भनेका छन तर खर्च छैन कसरी लैजाउँ ? ति दम्पत्तीले गहभरी आँशु पार्दै भने –‘हाम्रो यो रोदन सरकारले सुनि दिए धन्य हुने थियो । ’ त्यस अस्पतालले बेड चार्ज ५० प्रतिशत छुट गराई दिए पनि सवै औषधी निक्नु पर्ने हुँदा यति धेरै खर्च भएको गिता बताउ छिन् । गिताका श्रीमान वेरोजगार युवा हुन । गाउँमा खेती किशान गरेर गुजरा चलाउादै आएका उनलाई पाँच लाख भन्दा बढिको ऋणको भारीले थिचेको छ । र पनि उनका लागि सम्पत्ती र आफ्नो ज्यान भन्दा प्यारा ति सन्तान बनेकोले सवै संग सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
यहाँका सर्वसाधराण भन्छन यो देशका नेताहरुलाई रुघा खोकी लागे पनि विदेशका महँङ्गा अस्पतालमा पुगेर करोडौं उपचार खर्च गर्न पुग्छ भने सर्वसाधरणका ति चार सन्तान बचाई दिन किन खर्च पुग्दैन् ? यस प्रति सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको धेरैले जोड दिएका छन् । के सरकारले सुन्ला त ? यदि कसैले सहयोग गर्न चाहे जनकको मोवाई नम्वर ९८४७८९८४१४ मा सम्र्क राखेर सहयोग गर्न सकिनेछ ।